Ingxoxo kaWilmer Valderrama ngoHoward Stern
UWilmer Uthetha noWoward Stern malunga namaLadies
Ngo-Matshi ka-2006, "I-70 yabonisa" inkwenkwezi uWilmer Valderrama wathumela abantu abatyhukisayo baseHollywood kunye no-racy on-interview yomoya kunye noHoward Stern. U-Valderrama ngokuyinhloko wanikela i-Stern kunye nezigidi zakhe zakwaSirius abaphulaphuli bezinye izidumi ezitshisayo ezithandayo.
Nangona singenabo ubungqina obubalulekileyo bokuqhubeka, kukhuselekile ukucinga ukuba ubuncinane ezinye zeenkwenkwezi ezithe zinyaniso.
Emva koko, awukwazi ukuxelela ngenxa yokuba umfana ungumdlali wezorhwebo.
U-Valderrama wathi akazange alale ngesondo nomculi we-pop kunye noMasy Moore kodwa ukuba wathabatha ubuntombi bakhe. Waqhubeka wathi, "Ukwabelana ngesondo kunye no-Mandy kwakulungile, kodwa kwakungafani ne-aple efudumele." Kunzima ukwazi ngokwenene oko wayethetha ngako.
Kubonakala ukuba, uMorena wayengazi kakuhle ukuba angayithatha njani, nokuba. Wabuyela kuye wathi, "Yinto enyanisekileyo, ingabi yinyaniso. Ndibuhlungu ngenxa yam yokuba ndiyamthanda."
U-Valderrama ukhankanywe kuStern ukuba wayenomdlali we-actress uJennifer Love Hewitt kodwa akazange anike iinkcukacha. I-Stern yamcela ukuba alinganise inkwenkwezi kwinqanaba elilodwa ukuya kweyishumi kwaye uValderrama wabuyela ngokukhawuleza kunye nesibhozo.
Kungekudala emva kokuba udliwano-ndlebe lwaluqhutywe, Uthando Hewitt ucatshulwe kwingxoxiswano apho wayephikisana nayiphi na intlanganiso yesini kunye noValderrama. Waphendule kwiingxelo zamabango akhe ngokuhleka waza wathi, "Ndixelelwe, ngathi, ukuba sonke sasihlangene nabo, kwaye ndandithanda, ngokwenene?
Ewe, ndingathanda ukuba ndibe khona! "
U-Ashlee Simpson noLindsay Lohan
U-Valderrama akazange athi alele kunye no-Ashlee Simpson okanye uLindsay Lohan kodwa unako. Wathetha ukuba u- Ashlee Simpson "umemeza," eshiya abalandeli bacacise ngakumbi.
Kwakhona wathi uLindsay Lohan wayengenayo imiphumo, kodwa ukuba wayenomdla omkhulu wokutshiza.
Izimpendulo zakhe ezingaqhelekanga zashiya i-Stern kunye nabaphulaphuli bezibuza ukuba yintoni eyinyani kwaye yintoni ebenokuba yinto elula.
UJamie Presley, uRosario Dawson noJessica Alba
I-Stern yayichaza ngokukhawuleza iinkwenkwezi ezintathu zaseHollywood ukuba uValderrama wayexhunyiwe kwi-tabloids. Xa kufika kuJamie Presley, uRosario Dawson, kunye noJessica Alba, umdlali akayi kuqinisekisa nantoni na. Wathetha ukuba wabala bonke abafazi abathathu phakathi kwabahlobo bakhe kodwa bebengakhange baphathe umzimba kunye nabo.
Ukulala, Ukutshata, okanye Ukubulala
Emva kokuva malunga nazo zonke izitha zikaValderrama, uStern wagqiba ukudlala ngokukhawuleza "Ukulala, Ukutshata, okanye Ukubulala" usebenzisa abathathu abathintekayo. Wacela uValderrama ukuba ahlukanise ukuba uyalala, atshate okanye abulale uMaty Moore, uLindsay Lohan, noJennifer Love Hewitt.
UValderrama uthe ulala noM Mandy, watshata noLindsay, wambulala uJennifer. Uhlangothi lwe-Stern u-Artie unqabile ukuba uValderrama uya kulala nabo bonke abathathu kwaye abatshati nanye. Oku kuye kwaba enye yezonxibelelwano ezingalibalekiyo u-Valderrama unikezele.
Apho Le Valderrama Ekhohlo
Kwintetho ye-BlogTalkRadio ngo-2010, uValderrama wabonisa ukuzisola malunga noko akutshoyo kwi-Stern's show. Ukususela ngoko, uye wenza izilungiso kwaye uyaqhubeka ehlobo oluhle noMorey.
U-Valderrama naye wabonisa inkxaso ngoLohan xa ejongene neentlawulo ze-DUI, esithi "ndimthanda ukuba afe."
'Iminithi yokuYinqoba' I-Noodling Around Game
UMgqibelo uSheryl Underwood Biography
Indlela yokufumana iiTikiti zokuthi "Utshutshiso lwentsapho"
Imiboniso ephezulu malunga nokucoca ikhaya lakho
'Amaqhawe amabhinqa' Isiqendu 2 Isiqendu
21 Izinto Wena (mhlawumbi) Awuzange Ukwazi Nge 'Mad Men'
Iimpawu eziLawulayo ngokubhekiselele kwiMimiselo eLawulayo
Ziyaphi na izitiba ezichitha ixesha lasebusika?
Iingxowa-mali zoBume zeMbali nguMongameli
I-Admissions yeYunivesithi yaseLehigh
I-Hayley Mills kwi-Classic Disney IiFilimu
IZibhalo kwiNtlawulo kaYesu Kristu
Iingcebiso zoNgcono kwiCue Your Custom Cue
Indlela iAlfabhethi yamaGrike ephuhliswa ngayo
Indlela yokugqiba isicwangciso seSifundo
Indlela Yokuba YiGymnast yeOlimpiki
Amagama aqhelekileyo adidekileyo: I-Track and Tract
Venus kwiPisces - Iimpawu zeVenus
Indlela yokufunda iBharometer
Ngaba abaQalayo beGolf kufuneka bathathe izifundo?